Xildhibaan lagu weeraray guriga uu ka daganyahay Muqdisho
Posted On 15-06-2022, 11:41AM
Mudanaha ayaan bixin faahfaahin ku saabsan weerarka lagu qaaday hoygiisa iyo inta uu la egyahay Khasaaraha.
MUQDISHO, Soomaaliya – Xildhibaan Jibriil Cabdirashiid Xaaji, oo ka tirsan baarlamaanka 11-aad ee dalka ayaa xalay gurigiisa lagu weeraray bam gacmeed sida saraakiisha amaanka u xaqiijiyeen warsidaha Garowe Online.
Xildhibaan Jibriil Cabdirashiid Xaaji oo laga soo doortey degmada ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa ka badbaaday weerarkan oo lagu qaaday hoyga uu ka degan yahay xaafadda Taleex ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir.
Saraakiisha amaanka ayaa sheegay inuu jiro khasaare dhaawacyo ku kooban oo soo gaaray ilaalada xildhibaanka, kuwaasoo loola cararay xarumaha caafimaadka si loogu dabiibo, askarta ayaa la sheegay in qaarkood ay xaaladooda adag tagay.
Xildhibaanka ayaan bixin faahfaahin ku saabsan weerarka lagu qaaday hoygiisa iyo inta uu la egyahay khasaaraha ka dhashay weerarka lagu qaaday.
Taliyaha booliska degmada Hodan gobolka Banaadir Xuseen Cadceed iyo ilaaladiisa ayaa daqiiqado kadib tagay halka weerarka uu ka dhacay, iyagoo sameeyay howlgalo baaritaana ah, walow ay ku guul dareysteen iney gacanta ku soo dhigaan dambiilayaashii falkan geystay.
Majirto koox ilaa iyo hada sheegatay masuuliyada weerarka balse maalimihii la soo dhaafay waxaa magaaladda Muqdisho ka dhacay weeraro lidi ku ah amniga Caasimadda.
Isniintii labo bam gacmeed ayaa lagu tuuray saldhigyada booliska degmooyinka Hodan iyo Karaan ee magaaladda Caasimadda ah ee Muqdisho manajirto cid ilaa iyo hada loo soo qabtay dhacdooyinkaas. Maalin ka hor waxaa sidoo kale degmada Hodan lagu dilay mid ka mid ah ergadii soo dooratay xildhibaan Mahad Salaad oo hada ah agaasimaha NISA.
Kooxda Al Shabaab oo xiriir la leh Al Qaacida ayaa wali khatar ku ah amniga caasimadda inkastoo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in uu wax ka qabanayo amniga dalka oo sanadihii la soo dhaafay faraha ka sii baxayay.